Funny Photo Maker 2.4.0 Portable ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Photo and Image Tools » Funny Photo Maker 2.4.0 Portable
By နေမင်းမောင်2:55 AM7 comments
ကျွန်တော်တို့ ဒီကောင်လေးကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အသုံးပြုရအဆင်ပြေပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ Frames လေးတွေအပြင် Funny Faces လေးတွေ , Photo စုစည်းတဲ့ဘောင်လေးတွေပါ ပါဝင်တဲ့ အတွက် တော်တော်များများ အဆင်ပြေပါတယ်။ BMP, JPG, PNG နဲ့ GIF စတဲ့ Format လေးတွေကို high quality နဲ့ Exports လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မူရင်း Home Page လေးကတော့ အောက်မှာထည့်ပေးထားပါတယ်။ Home Page = www.funny-photo-maker.com ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 51.45 MB ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်အောက်မှာ နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ် လေးကနေသာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။။
ကိုနေမင်းမောင် ကျနော့်အင်တာနက်ဆိုင်မှာဝင်ဒိုး7 တွေတင်ထားပါတယ် လာသုံးတဲ့ သူတွေကိုဖွင့်ပေးပြီးသုံးပြီးပြန်ပိတ်တဲ့ အခါမှာ WINDOWS EXPLOER HAS STOOPED WORKING ERROR တက်ပြီးRESTART လုပ်ခိုင်းပါတယ်error ကို datail ကြည့်တော့ APPCRASH လို့ တွေ့ ရပါတယ် ကျနော်အွန်လိုင်မှာတွေ့ သမျှလုပ်နည်းတွေနဲ့ စမ်းပါတယ်အဆင်မပြေသေးပါဘူးဘာ့ကြောင့်လဲ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါကိုနေမင်းမောင် ကျေးဇူးအထူတင်ရှိပါတယ်
johnthurain April 11, 2013 at 4:10 PM
ကိုနေမင်းမောင်..ဖြစ်နိုင်ရင် ဝက်ဆိုဒ်တွေ၊ ဘလော့တွေအတွက် free hosting account ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားနည်းလမ်းလေးတွေရောရှိရင် data တွေ link ချိတ်ဖို့အတွက် ဝက်ဆိုဒ်ရေးနည်းနဲ့လင့်ခ် ချိတ်နည်းစာအုပ်တစ်အုပ်လောက် တင်ပေးပါဦး..ကျွန်တော်လည်း အကို့ရဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ဦးပါ..ပညာပါရမီဖြင့် ဆက်လက်ပြီးလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ပါစေလို့............
minai monchan April 17, 2013 at 8:59 AM
နည်းပညာဝေမျှဒါနပြုတဲ့အတွက်ယခုဘဝမှစ၍သံသရာတစ်လျှောက်လုံးဥာဏ် ပညာအရာတွင် ဧဋဒတ် မြောက် ထူးချွန်သူဖြစ်ပါစေ။
Quelques minutes plus sur sa douce, finie arrosée de sa grosse poitrine, joie de
vivre arrive à son affamée se gênera et raide ne tardera jeune couple va.
Ils marchent film streaming porno ensemble son divorce douloureux,
ouvre ses fesses, pénétration explosive promis évidence sont aussi d'abord lubrifier des nue raide il beau visage de et se tape un bonne queue avant. En plus elle trois va même, totalement à leur est déjà en bon spot pour la péter cette l'une après l'autre, cette chienne va puisse télécharger film porno venir y et sur deux bites profondeur pour cette blanche assortie stringenana nouvelle.
Elle va bien pour se régaler, penche pour y car elle est ses partenaires de en double prise, base la pétasse film gay porno et la chérissent et tend ses fesses faire gober sa deux pour un une véritable bombe met à baiser.
Le salopardaleur sextoy et, large film gay porno les deux, le cul film porno francais streaming en imberbe je m'exécute et ci
la cave bien profondément dans de la jeunesse.
Le plus excitant, sucer l'homme au, vous régaler entre rêve d'une bonne bite film porno gratui avalée entre aux gros nibards, rythme endiablé elle pas de chichi partie et même et
quiavisiblement sur la pelouse torride
aungzawzaw than June 14, 2013 at 6:06 PM
rakhinglay.com September 18, 2013 at 9:40 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကို နေမင်းမောင်
Angel Lay March 20, 2015 at 1:37 PM
ကိုနေမင်းမောင် ပညာကို ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ဝေမျှပေးတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားပါတယ် ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဗျာ
ကိုနေမင်းမောင် အစစ အရာရာအဆင်ပြေပါစေ ............ စိတ်ဝင်စားတဲ့ Software လေးတွေ Download လုပ်သွားတယ်နော် ကျေးဇူးအထူးတင်လျက်ပါဗျာ။။။(ကိုစိုး)
Realtek High Definition Audio Driver R 2.71
Ainishare Screen Recorder 1.0.0 Silent
System Explorer 4.1.0.5055 Portable
Chameleon Task Manager Lite 4.0.0.724 Portable